Trano Famokarana Ao Hollywood Nitory Koreana Tatsimo Miisa 15 Noho Ny Fandikàna Seho Amin’ny Fahitalavitra Nefa Tsy Nisy Fanomezan-dàlana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Septambra 2014 2:28 GMT
Ny fiteny Koreana. Sary avy amina mpampiasa Flickr, spencer341b. CC BY ND 2.0
Nitory Koreana Tatsimo miisa 15 noho izy ireo nanao dikanteny koreana, izay azy ireo manokana ary amin'ny fomba tsy matihanina ho tamin'ireo seho fanta-daza maro amin’ny teny Anglisy, ny trano famokarana toa ny Warner Bros. sy 20th Century Fox. Nosoratana sy noraketina tamina failo (.smi) hafa mihitsy ireo dikateny ireo, izay namboarina hifandrindra amin'ny failo iray misy ny votoaty ka ahafahan’ny mpijery sady mahita ny dikanteny no manaraka koa ny seho.
Nilaza ireo trano famokarana fa nanosihosy ny zon'ny mpamorona izy 15 ireto noho izy ireo tsy nomena fahefana hanao ny dikantenin’ireo seho ireo ary koa nitondra fatiantoka teo amin’ny fidiram-bolan’izy ireo izany satria naleon’ny mpijery fahitalavitra nijery seho nampiasa ireo dikanteny tsy nahazoan-dàlana toy izay nanaraka ireo izay natao tamin’ny fomba ofisialy, ka nalefa tamin’ny fahitalavitra koreana miaraka amin’ny dikanteny notontosaina tamin'ny fomba matihanina.
Ireo orinasa amerikana misahana ny fampialàm-boly dia nanarama kabinetranà Koreana mpisolovava hametraka ny fitoriana eo anivon’ny fahefana ao an-toerana. Araka ny lalàna koreana, dia mety ho voasazy dimy taona an-tranomaizina ireto mpanao dikanteny tsy matihanina ireto na koa mandoa onitra dimy ka hatramin’ny 50 tapitrisa won (48,600 dolara amerikana).
Misy ny mametra-panotaniana momba izay mety ho fiantraikan’ity raharaha ity amin’ny kolontsain'ny fankafizana iarahan'ny Koreana. Matetika ny mpankafy mafàna fo no manao ny dikanteny ho fomba fanehoana ny fitiavan’izy ireo ny seho ankamamiany, ka mametraka eo amin’ny fiafaran’ny dikanteny ny anaran’izy ireo, ny fampahafantarana ny tenany amin’ny aterineto (ID) ary ny adiresy imailaka, mba ahazoana ny akon’izany avy amin’ireo mpankafy hafa.
Ny sasany nanamarika fa tsy olana na ratsy na tsia ny zava-kinendrin'ireto dikanteny ireto, ny zava-misy dia manamora ny fitrohana ny seho manontolo ary tsy nisy sarany ny fitrohana ireny dikanteny ireny amin’ny aterineto. Nefa iray monja tamin'ireo mpanao dikanteny voahenjika no ahiana ho nanao sy nanaparitaka azy ireo ho fitadiavam-bola.
Solonanarana mpampiasa aterineto (ID): cryp**** niaro ireo mpanao dikanteny ao anatina fanehoankevitra iray izay hita eto ambany momba ny lahatsoratra iray an-gazety mifandraika amin'izany:
Izahay tsy nilaza hoe te-hijery ireo fandaharana alefa nefa tsy handoa sarany amin’izany. Tsapako fa maro no tsy nahazo izay nosoratako. Ny mahasosotra ahy dia ny fihetsik’izy ireo. Tany am-piandohana dia navela hitranga fotsiny izao toe-javatra izao, ankehitriny anefa, satria toa mety hampidi-bola be izany, ary koa hatramin’ny nampananosarotra ny fanatratrarana ireo mpanaparitaka, dia nanao dingana mora izy ireo tamin’ny fanenjehana ara-pitsarana ny mpanao dikanteny. Ireo mpanaparitaka ireo mihitsy no tena nanao ratsy. Tena tsy ny hijery ireo seho ireo tsy andoavana sarany velively no tiako nambara.
Patdaewon, bilaogera ao amin’ny vavahadim-pikarohana Naver, nanoratra:
Raha toa moa ka ny Hallyu, tantara an-tsarimihetsika mitohy antsika koreana, ary ireo lahatsary no misy mandika amin’ny teny Taioanezy, Malezianina, Sinoa sy Arabo, ka hamidy 100 Won eo ho eo (tokony ho 10 Cents amerikana eo ho eo) amin’ny aterineto, hanao ahoana ny fihetsi-tsika ? Afaka handinika ve isika ka hiteny hoe, “ Azo sainina izany raha araka ny zava-misy sy mitranga ankehitriny eto amin’ny firenena ? Azafady, mba azon-tsika atsahatra fotsiny ve ny fampiasana ity fiangetsangentsanam-piteny/resaka tsara lahatra ity hanamarinan-tena ? Satria mba te-hamaly bontana koa isika ka haka fepetra araka ny lalàna raha mihatra amintsika ny toa izao. Zon’ny mpamorona ho an’ny asa famoronana rehetra na anà- vahiny izany na anà- koreana, tsy maninona, samy manan-danja avokoa.
Ao amin’ny Twiter, nametra-panontaniana i @kingkenny1967, momba ny fiheverana ity zon’ny mpamorona ity :
— Craic Dealer (@kingkenny1967) 29 Jiona, 2014
Saingy ny fanontaniako dia hoe nahoana ireto dikanteny ireto no iharan’ny famoretana mafy toa izao ? Na dia tena azoko aza fa anatin’ity rafitra kapitalista ity, afaka mamorona lalàna ny mpanankarena, saingy tena azo lazaina ho asa famoronan'ny olona mihitsy ireo dikanteny ireo. Tsy sahala amin’ireo olona mpaka tahaka dikanteny izay mitovy tanteraka amin’ny antsipirihany, ka ilainao ny miaro iretsy dikanteny ofisialy iretsy amin'ny filazàna fanànan'izy ireo ny zon’ny mpamorona azy ireo manokana.
Raisiin'ny lalàna Koreana ho toy ny famoronana fanampiny fotsiny ny dikanteny — sokajy iray araka ny lalàna izay miahy ny asa fakàn-tahaka [ko] — ary arovan’ny lalàna momba ny zon’ny mpamorona saingy amin’ny tarehim-bola voafetra ihany. Mike Masnick, bilaogera monina ao San Francisco, nanamarika fa vao haingana no namboarina ny lalàna koreana mikasika ny zon’ny mpamorona ho ampahany ao anatin’ny sehatry ny fifanakalozana malalaka eo amin’ny Firenena Koreana sy Amerikana. Toa izao no nosoratany :
Tsy hoe akory, toy ny ahoana no tokony ho toetran’ny zon’ny mpamorona, fa ny fiheverana hoe manao heloka bevava izay manampy dikanteny aminà tantara an-tsarimihetsika mitohy amerikana no tena mahatsikaiky tokoa. Na dia ambanimbany kokoa aza ny onitra tokony haloa raha mitaha amin’ny tàha ara-dalàna ampiasaina any Etazonia, ny fandraisana izany fotsiny ho toy ny heloka bevava, toa izay ny tsy fahombiazan’ireo trano famokarana ao Hollywood eo amin’ny fikarakarana ny tsenan’izy ireo araka ny tokony ho izy, dia tena milaza mivandravandra be (ary tsy misy tsara izany rehetra izany) ny nampivaona ny fomba nitondrana ny adihevitra mikasika ny zon’ny mpamorona.
@Kyeolgun namintina ny hevitr’ireo trano famokarana:
Heveriko fa ny antony dia satria ny fifandraisana eto dia hoe “Ny fitrohana amin’ny aterineto ireo dikanteny” dia mitovy marina mihitsy amin’ny “Fitrohana tsy ara-dalàna amin’ny aterineto ny votoatin'ilay lahatsary”.